Dowlada Kenya la bixi mayno ciidankeena jooga Soomaaliya ilaa laga adkaado Al shabaab – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaDowlada Kenya la bixi mayno ciidankeena jooga Soomaaliya ilaa laga adkaado Al shabaab
Hiiraan Xog, Madaxwaynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in Dowladda Kenya aysan la bixi doonin ciidamada ka jooga dalka Soomaaliya, ilaa iyo inta laga ciribtirayo kooxaha argagixisada gaar ahaan Ururka Al shabaab.
Kenyatta ayaa warkan ka sheegay munaasabad uu kaga qayb galay gobolka Nakuru, taas oo lagu xusayey toddoba sano guuradii kasoo wareegtay markii ciidamada Kenya gudaha usoo galeen dalka Soomaaliya.
“Soomaaliya waxaan aadnay sannadkii 2011, waanuna sii joogi doonnaa ilaa iyo inta xasillooni buuxda looga dhalinayo dalka Soomaaliya” Uhuru ayaa sidaas yiri isagoo u mahadceliyey ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya, kuna ammaanay sida habboon ee ay shaqadooda u gudanayaan.
Hadalkan ayaa kusoo aadaya labo bilood kaddib markii Uhuru Kenyata waraysi uu siiyey Idaacadda VOA ku sheegay in dowladdiisu waddo qorshe sannadka soo socda ee 2019 ciidamada Kenya looga soo saarayo Soomaaliya.
Kenya ayaa xilligaas cabasho xooggan ka muujisay miisaaniyad dhimis lagu sameeyey dhaqaalaha Qaramada Midoobay u qoondaysay kharashaadka ku baxa ciidamada Kenya ee qaybta ka ah AMISOM.
Go’aanka cusub ee Dowladda Kenya ayaa imaanaya toddobaadyo kaddib markii Dowladda Britain shaacisay in £192 milyan ugu deeqday Soomaaliya, lacagtaas oo £7 milyan oo kamid ah lagu taageeri doono Hawlgalka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM.
In ka badan 4,000 oo askari oo ka tirsan militeriga Kenya, ayaa sanadkii 2011 usoo tallaabay dhanka Soomaaliya, kaddib weerarro iyo afduubyo ay mileeshiyaad Al-shabaab ka tirsani gudaha Kenya ka geysteen.
2012, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ansixiyey qaraar u oggolaanaya ciidamada Kenya in ay ku biiri karaan hawlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM, kaas oo soo bilowday sanadkii 2007.